Hlola iLille, eFrance - World Tourism Portal
Hlola iLille, eFrance
Yini ukubona. Izindawo zokudlela ezihamba phambili eziphezulu eLille, eFrance.
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha eLille
Bukela ividiyo ekhuluma ngeLille
ILille idolobha eliphakathi nendawo esifundeni saseNord-Pas de Calais enyakatho yeFrance nesibalo sabafundi esikhulu kakhulu. Leli dolobha linemvelaphi eqinile yezimboni, kepha, ngemuva kweminyaka ethile enzima, manje liyaziwa kulo lonke elaseFrance ngesikhungo salo sedolobha elihle nokuphila kwalo kwamasiko okusebenzayo.
Hlola iLille, indawo yesihlanu enkulu kakhulu yedolobha kanye nendawo yesine yedolobha. Itholakala enyakatho yezwe, emfuleni iDeûle, eduze komngcele neBelgium. Yonke indawo yedolobha elikhulu laseLille, endaweni yaseFrance neyaseBelgian (Courtray, Tournai) ilinganiselwa kwi2007 ezungeze izakhamizi ze1,885,000, zibalwa njengenye yezindawo ezinkulu zedolobha laseYurophu.
Abavakashi abaningi cishe bazofika ngesitimela ngenxa yesitimela esikhulu samazwe omgwaqo esakhiwe lapho. Kungenzeka ufike esikhumulweni sezindiza i-Charles de Gaulle Paris bese uqhubeka ngesitimela cishe ihora. Kusuka esikhumulweni sezindiza iRyanair's Paris (Beauvais), akukho ukuxhumana kwesitimela nhlobo futhi ukuphela kwebhasi esibuyele kulo Paris uqobo. Inkampani yeFlibco futhi isebenza nomqeqeshi oqondile oxhumanisa i-Lille ne Brussels South Charleroi Airport ngemizuzu ye-90.
ILille Lesquin International Airport incane kepha ilungele ukungena eLille noma iqhubeke ezindaweni eziseduzane nomngcele eBelgium. Zombili izindiza ezinkulu nezisabelomali zisebenza izinsiza ezihleliwe. Ngokungafani nezikhumulo zezindiza ezikhudlwana akukho okuncane okuhamba njengokuhamba njengoba isheke lingena ngaphakathi emnyango futhi amasango ezokuphepha asemva kwendawo yokungena. Kodwa-ke, kungaba khona ukuhamba ukusuka endaweni yesango kuya endizeni uma ipakiwe emgwaqweni wetekisi kunokuba kuyi-jet way. Umqeqeshi oqondile uxhuma enkabeni yeLille (ume ngaphandle kwesitimela esikhulu) emizuzwini engu-20, bese egijima kanye ngehora ebiza i-7 Euro (ithikithi lokubuya yi-9 Euro). Itekisi ibiza cishe i-20-30 Euro.
ILille inemizila emibili engaphansi kwangaphansi esebenza ngemoto exhuma maphakathi nedolobha namadolobha ambalwa. Inemizila eminingi yamabhasi ehamba kulo lonke idolobha nemizila emibili yetramu eya eRoubaix naseTourcoing, okungamanye amadolobha alesi sifunda.
ILille inesikhungo esihle sedolobha, ilulungele kahle uhambo lwedolobha. Iningi lokubona lingahlanganiswa kuhambo lokuhamba.
I-La Vieille Bourse (1653). Ngesikhathi phakathi kwezikwele ezimbili ezinhle, i-Place du Général-de-Gaulle nePray du Théâtre, lokhu kuhweba okwedlule kusadlala indima enkulu empilweni yedolobha. Ungathola abathengisi bezincwadi kanye nezimakethe zezimbali enkantolo yangaphakathi.
Isigcawu esikhulu, i-Place du Général-de-Gaulle, eyaziwa kangcono ngokuthi yi "Grand Place", sinezindlu eziningi ezithandekayo zomlando, njengekomkhulu le-neo-Flemish lephephandaba lendawo iLa Voix du Nord, nomthombo onesithombe sikankulunkulukazi , I- "la Grande Déesse" (1843).
Beka iRihour, izungezwe izindawo zokudlela, inesikhungo sokwaziswa izivakashi ngaphakathi kokuhehayo okuyinhloko, i-Palais Rihour (1453).
Ihholo ledolobha liyakufanelekela ukubukwa futhi lingahlanganiswa kahle ngokuvakasha ePorte de Paris (1692).
I-Opera (1923) neChamber of Commerce (1921) zitholakala ngokusondelana futhi zinikeza izinto ezinhle kakhulu, ikakhulukazi lapho zikhanya ebusuku.
Thatha umgwaqo udlula kwikota yakudala yedolobha, ebizwa ngokuthi i-Vieux Lille, futhi ujabulele imigwaqo ethule, enamatshe amnyama, izitolo ezinhlobonhlobo zabadwebi, izindawo zokudlela zama-gourmet, neCathédrale Notre Dame de la Treille. Imigwaqo ephawuleka kakhulu njengeRue de la Monnaieand Rue Esquermoise ilifanele ngempela lolu hambo.
Ukude ukusuka enkabeni yedolobha yi-la Citadelle, eyisibonelo esijabulisayo yokwakhiwa kwamasosha okuzivikela, eyakhiwe nguVauban, umakhi wezempi odumile waseFrance, ngaphansi kokubusa kukaLouis the Nthathu. Endaweni efanayo kune-zoo (yamahhala) nepaki enhle.
I-Musée des Beaux-Arts, imnyuziyamu eyaziwayo emboza ubuciko baseYurophu kusukela nge-15th - ngekhulu le-20th.
Imyuziyamu yoMlando Wezemvelo, iqoqo elikhulu lezilwane ezincelisayo ezinamafutha, izinambuzane, izinsalela, njll.
UMusée de l'Hospice Comtesse, isibhedlela sangaphambili manje esibonisa ubuciko.
I-Musée d'Art et d 'Industrie de Roubaix: ILa Piscine, imnyuziyamu yobuciko bekhulu le-20th eyayibanjelwe endaweni enhle ye- "Art déco" (ukuqala kwekhulu le-20th) yangaphambili yokubhukuda.
I-LAM - Imyuziyam yesimanje yeLille Art, ubuciko besimanje, ubuciko bangaphandle, ubuciko besimanje.
Imakethe kaKhisimusi yaminyaka yonke (eSifundeni iRihour, maqondana nehhovisi lezivakashi) kumele ibe izivakashi. Kusukela maphakathi no-November kuze kube izinsuku ezimbalwa emva kukaKhisimusi, hlola izinsuku nezikhathi zokuvula.
Imakethe evulekile, iMashié de Wazemmes, ivulwa njalo ngoLwesibili, ngoLwesine nangoSonto ekuseni, kodwa usuku oluxakile impela lungeSonto. Abathengisi bathengisa konke ngezithelo ezintsha nemifino, izincwadi nezinto zokubhala, amasudi nezicathulo, amakha kanye nezingubo zangaphansi! Qiniseka ukuthi uthatha isikhwama sezimvini ezintsha, isimbali esikhanyayo sezimbali ezisikiwe, enye inkukhu enama-rotisserie namazambane okugazingiwe kwasemini, nengilazi yobhiya kwenye yezindawo eziningi ezungeze imakethe.
ILa Braderieis umcimbi waminyaka yonke ozoba semgwaqweni njalo ngoSepthemba, okufika kuwo izigidi zabantu eLille. Uzothola konke: imidwebo, izinto zakudala, imihlobiso, ifenisha. Izakhamizi ziyahlangana, zidla izimbaza ezinama-fries namaFulentshi aseFrance, esimweni esimnandi kakhulu.
Kanye ngenyanga, kunomcimbi omkhulu we-reggae ku-Wazemmes'called Chalice Sound System
Iya kwesiphuzo ngesitayela eHermitage Bar, ehhotela lokunethezeka leHermitage Gantois. Le ndawo ivulekele umphakathi jikelele ekuhlinzekeni ukuthi ugqoke futhi niziphatha ngendlela efanele, futhi ingesinye sezindawo ezihlanjululwe kakhulu ukujabulela isiphuzo eLille (enentengo efanele). Ihhotela libuye liphathe imibukiso yezobuciko ongayijabulela mahhala.
Imigwaqo yabahamba ngezinyawo esedlule iGrand Place (i-rue de Béthune, i-rue Neuve, iRue du Sec Arembault, i-rue des Tanneurs, njll.) Inikezela ngezitolo ezithandwayo zezingubo ezifana ne-Etam, Pimkie, Zara, H&M, iSinéquanone, kanye nama-pubs amancane, izindawo zokudlela, kanye nezinkundla zamabhayisikobho ezimbili (ezinkulu). Ezinye izakhiwo ezakhiwa yilezi zitolo zinobuciko obuhle be-30's-40's design.
Isikhungo esikhulu kunazo zonke sokuthenga i-Euralilleis Lille futhi sinikezela ngamaketanga wokugqoka athandwayo, kanye ne-Carrefour hypermarket. Isendaweni ephakathi kweziteshi ezimbili zezitimela, iGare Lille Flandres neGare Lille Europe, futhi ngaphakathi enhliziyweni yedolobha eliseduze namahhotela amaningi, i-Euralille itholakala kalula kubahambi abangena edolobheni.
ILe Furet du Nord (Indawo ye-du du Général de Gaulle) isitolo esikhulu kunazo zonke izincwadi eYurophu, ibukeka njengenye “yesikhumbuzo” esikhulu kunazo zonke edolobheni. Inezitezi ze-8 futhi inikeza izihloko ezingaphezu kwe-420,000.
Kunenqwaba yama-boutiques we-upscale (isib. ULouis Vuitton, uHermès, uHugo Boss, uKenzo) kanye nabashisekayo, izitolo ezizimele eziseVieux Lille.
Abathandi bokudla nakanjani banganconywa ukuthi bavakashele iLille. Kukhona amakhulu patisseries amancane athengisa izinhlobo ezinkulu zamakhekhe. Idolobha liphinde libe nezitolo eziningi zoshokoledi, njengeGuillaume Vincent (12 Rue du Cure Saint Etienne), ezithengisa ushokoledi ohlotshiswe ngendlela efanele, okuthi uma kuqhathaniswa nokunambitheka kwabo, kumele kube ne-90% cocoa cocoa.
Kuzojatshulelwa izimbali ezihlwabusayo ezigcotshwe kahle eMeert (patisserie enhle ngokumangazayo) eRue Esquermoise ngqo eduze kwaseGrand-Place (ndawo du Général de Gaulle) (Isiteshi: iRihour ku-Line 1), nasendaweni entsha lapho i-Piscine (iMnyuziyamu wezobuCiko nezimboni) yeRoubaix (Isiteshi: IGare Jean Lebas kuLayini 2)
ILille inezinga eliphansi ngokwesilinganiso sokuhlaselwa okulimazayo kwedolobha laseYurophu.
Uma usuhambile eLille kufanele uvakashele iCourtray. Yidolobha laseBelgian eliseduze nomngcele waseFrance, ingxenye yendawo yedolobha laseLille, efinyeleleka kalula ngesitimela.